I-TomTom Curfer ilandelela ukusebenza kwethu njengomqhubi | Iindaba zeGajethi
I-TomTom Curfer ilandelela ukusebenza kwethu kakuhle njengabaqhubi
Ifoto ngu: Slashgear
I-TomTom, inkampani ekhokelayo ekulandeleleni i-GPS isandula ukwazisa I-Curfer, isixhobo esitsha esinakho ukwenza izinto ezininzi, kwaye ayizukugcina kuphela idathabheyisi ebalulekileyo kunye nokujonga okwenyani kwexesha lesithuthi sethu, kodwa iya kubonelela ngedatha malunga nendlela esiqhuba ngayo kunye nendlela esisebenza ngayo xa siqhuba. UTomTom akaze ayeke ukusimangalisa ngezixhobo zayo. Ifemi inedumela elimiselweyo kule ndawo kwaye ngesixhobo sayo esitsha seCurfer ifumene uncumo koosomashishini abaninzi kunye nabaqhubi abaqhelekileyo. Sikuxelela ukuba yintoni le nto inesixhobo esinqabileyo, asiqapheleki ngaphakathi emotweni yakho, kodwa akukho nenye inkcukacha elahlekileyo.
Esi sixhobo Ingene kwizibuko le-OBD Oko kubandakanya iimoto ezininzi, njengoko usazi kakuhle, zezona zininzi zeeshishini kunye noomatshini abakhethekileyo basebenzise ithuba lokuqhuba uhlalutyo kunye noxilongo kwimeko yesithuthi ngenxa yekhompyuter ebhodini. Isixhobo siya kuba nakho ukumisela idatha ekhethekileyo njengokusebenza kwe-braking, amandla e-G esiwanyamezelayo ngelixa siqhuba kunye nedatha yokukhawulezisa. Ukongeza, iya kusinika eminye imiba enje ngobushushu beoyile, ivolthi yebhetri nokunye okuninzi. Kuyamangalisa kodwa kuyinyani, asizukuxoka sithi isixhobo esitsha asimangalisi.
NgeCurfer, abasebenzisi baya kufumana izilumkiso ezibomvu xa iiparameter ezithile zihamba ngaphezulu kwesiqhelo, njengobushushu beoyile. Ewe siyabona apho isithuthi sikhona ngenxa yokulandela umkhondo we-GPS, ayinakuba ilahlekile kwisixhobo seTomTom. Esi sixhobo siza kubiza i-60 euros kuphela kwaye iza kuphehlelelwa eNetherlands, eFrance, eJamani, eBelgium nase-United Kingdom. Iimakethi ezinje ngeSpain kunye neMelika ziya kuphulukana nethuba lokonwabela i-TomTom Curfer ubuncinci ekuqaleni. Phucula ukuqhuba kwakho ngokuthatha idatha ekubonelela ngayo kwaye ungonga ipetroli kunye nokulungiswa.
Kutshanje sipapashe uluhlu lwe iinkqubo zokuhlaziya i-TomTom yakho simahla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » I-TomTom Curfer ilandelela ukusebenza kwethu kakuhle njengabaqhubi
I-LGV 20 iya kufumaneka ngombala; igrey edolophini, isilivere eswiti okanye ipink yothando
Lo ngumdlalo wabadlali abaninzi kunye ne-beta yoMnxeba woXanduva: Imfazwe engapheliyo